Sawirqaade - Creativos Online | Creativos Online (Bogga 2)
Haddii aad ubaahantahay inaad hagaajiso waqtigaaga Adobe Illustrator wuxuu kuu ogolaanayaa inaad rinjiyeysid dharbaaxo xiran qalabka dheriga rinjiga is dhexgalka.
Ma u baahan tahay inaad sameysatid boodhadh ama boodhadh? Uma baahnin aqoon badan si aan ula nimaadno naqshaddo naqshad leh, midabbo leh oo wax ku ool ah. Waxaan ku bareynaa sida loo helo.
Sawir fikradeed oo ku ciyaaraya xiriirka fikradaha iyadoo laga hadlayo fikradda kalluunka iyadoo aan la muujin weligeed. Tani waa hab fiican oo kor loogu qaado hal-abuurnimadeena.
Haddii aad waligaa isweydiiso waxa ay noqon lahayd taxanaha "Game of Thrones" haddii la dejin lahaa 80-meeyadii, halkan ayaad ka ogaan kartaa.
Miyaad jeceshahay inaad awood u yeelatid inaad sameysid is-sawir leh qaab joomatari ah? Hadday sidaas tahay, ha moogaan mid ka mid ah tallaabooyinka aan hoosta ku siinayno.
Adobe Illustrator ayaa tilmaamtay, in hadda in ka badan 180 milyan oo sawiro ay asal ahaan ka soo jeedaan bil kasta iyada oo la adeegsanayo, wax sii wadaya iyaga hoggaamiyeyaal.
Maxaa ka dhiga qalabkan mid gaar ah waa naqshadaha vektorka si loo muujiyo, loo naqshadeeyo, iyo inbadan.
Waan ognahay in dhammaan barnaamijyada Adobe sida Illustrator runtii aysan lahayn tartan weyn, laakiin waa inaad ogaataa waxyaabaha kale ee ugu wanaagsan.
Cloud Cloud 2017 ayaa horeyba u jiray oo hadda waa waqtigii lagu ogaan lahaa waxa ku cusub Adobe Illustrator CC 2017 maanta.
Halkee laga helaa dulinka bilaashka ah, ilaha, iyo burushyada Adobe Illustrator? Sii wad akhriska oo ka ogow Hal-abuurka internetka ee'ivivos '!
Bixis muujineysa sida muujiyeha ah aad ugu guuleysan karto shaqooyin tayo sare leh adoo adeegsanaya qalin iyo gradients.
TemplateShock, in kabadan 600 oo tifaftirayaal bilaash ah lana daabacan karo oo loogu talagalay xirfadlayaasha iyo shirkadaha
Isku-darka toban fiilooyin oo aad u xiiso badan oo bilaash ah oo loogu talagalay Adobe Illustrator. Miyaad tabi doontaa iyaga? Sii wad akhriska!
Isticmaalaha Sawir-qaadaha waxaad ku abuuri kartaa magaalo ku taal muuqaalka isometric qalab 3D Extrude iyo Bevel ah
Isku-duwidda 100 casharro naqshadeynta garaafka ah oo loogu talagalay Adobe Photoshop iyo Illustrator oo ku habboon Kirismaskan
In yar oo fiilooyin ah oo aan ka maqnaan karin Adobe Photoshop iyo Adobe Illustrator
si dhakhso leh u sameyso garaafka Sawirka